बाइकहरुको नयाँ मूल्य सार्वजनिक: १० हजार रुपैयाँसम्म बढ्यो, अब कुन मोडलको कति ? - Arthatantra.com
वि.सं.२०७८ माघ ६ बिहीवार
बाइकहरुको नयाँ मूल्य सार्वजनिक: १० हजार रुपैयाँसम्म बढ्यो, अब कुन मोडलको कति ?
काठमाडौं । पछिल्लो समयमा मोटरसाइकल व्यक्तिदेखि व्यवसायीहरुसम्मका लागि नभई नहुने अत्यावश्यक साधनको बनिसकेको छ ।
बढ्दो सवारी चापले गर्दा सार्वजनिक सवारी साधानमा हुने ढिलाईका कारण पनि नेपालमा मोटरसाइकल प्रयोगकर्ताहरुको संख्यामा तिव्र वृद्धि भएको छ ।
नेपालमा फरक फरक आर्थिक स्तर र फरक फरक रुचि अनुसार विभिन्न प्रकारका मोटर साइकलहरु प्रयोग हुँदै आएका छन् ।
नेपाली बजारमा उपलब्ध विभिन्न मोटरसाइकल कम्पनीहरुले अंग्रेजी नयाँ २०२२ लक्षित नयाँ मूल्य सूची सार्वजनिक गरेका छन् ।
नयाँ मूल्य अनुसार कम्पनीहरुले १ हजारदेखि १० हजारसम्म मूल्य बढाएका छन् । उपलब्ध बाइकहरुमध्ये अधिकांशको मूल्य केही वृद्धि भएको देखिएको छ ।
विभिन्न कम्पनीका छुट्टाछुटै मोडेलका बाइकहरुको नयाँ मूल्य तोकेका छन् । जसअनुसार बाइकहरु २०२२ मा केही महंगा भएका छन् ।
कम्पनीहरुले अंग्रेजी नयाँ २०२२ लक्षित गरि नेपाली बजारमा बजाज, टीभीसएस, हिरो, होन्डा र यामाहा विभिन्न मोडेलका बाइकरुको मूल्य बढाएका हुन् । आज हामीले नेपाल उपलब्ध विभिन्न कम्पनीहरुको छुट्टाछुट्टै मोडेलहरुको नयाँ मूल्यका बारेमा जानकारी दिएका छौ ।
बजाजको ल्पाटिना १०० इएस( १०२सिसी)को १ लाख ८९ हजार ९ सय रुपैयाँ, डिस्कभर १२५ ड्रम (१२४ सीसी) २ लाख ९ सय, डिस्कभर १२५(१२५ सीसीको २ लाख १४ हजार ९ सय रुपैयाँ, डिस्कभर १२५ एसटी (१२५ सीसी) २ लाख १५ हजार ९ सय रुपैयाँ रहेको छ ।
यस्तै, पल्सर १२५ डिस्क(१२५ सीसी) २ लाख ४४ हजार ९ सय, पल्सर १५० एसडीको २ लाख ७५ हजार ९ सय, पल्सर १५० टिडीको २ लाख ९० हजार ९ सय, पल्सर १६० एनएस टिडी एबिएसको ३ लाख १९ हजार ९ सय, पल्सर २२० एफ एबिएसको ३ लाख ६१ हजार ९ सय, पल्सर २०० एनएस एबिएको ३ लाख ६७ हजार ९ सय रुपैयाँ पर्दछ ।
त्यसैगरि पल्सर २०० एनएस एफआईको ३ लाख ९३ हजार ९ सय, एजेन्जर १६० स्ट्रिट एबिएसको ३ लाख ४५ हजार ९ सय, एभेन्जर २२० क्रुस २२० को ३ लाख ६६ हजार ९ सय, डोमिनार २५० एबिएसको ५ लाख १८ हजार ९ सय, डोमिनार ४०० एबिएसको ५ लाख ९८ हजार ९ सय रुपैयाँ पर्दछ ।
नयाँ मूल्य सूची अनुसार टीभीएसले सबैभन्दा बढी अपाचे आरटीआर १६० आरडी रिफ्रेस र टीभीएस एक्सएल १०० मा मूल्य वृद्धि गरेको छ ।
टीभीएसका यी बाइकहरुको मूल्य १० हजार रुपैयाँका दरले वृद्धि भएको हो । योसंगै अपाचे आरटीआर १६० फोरभी आरडी रिफ्रेसको ३ लाख १८ हजार ९ सय रुपैयाँ र टीभीएस एक्सएल १००को १ लाख ३८ हजार ९ सय रुपैयाँ पुगेको छ ।
यस्तै, अपाचे आरटीआर २०० फोरभी एफआई बीएस६ को ६ हजार रुपैयाँले बढेर ३ लाख ९६ हजार ९ सय रुपैयाँ, अपाचे आरटीआर २०० फोरभी एबीएसको५ हजार रुपैयाँले वृद्धि भई ३ लाख ६७ हजार ९ सय रुपैयाँ पुगेको छ ।
अन्य केही मोडलहरुमा १ देखि ४ हजार रुपैयाँ सम्मको दरमा मूल्य वृद्धि गरिएको छ । त्यसैगरी हालै नेपाली बजारमा भित्रिएको रेडर र अन्य केही मोडलमा पनि उही पुरानै मूल्य कायम भएको छ ।
हिरोले आफ्नो अधिकांश मोडलको मूल्यमा १ देखि ३ हजार रुपैयाँ सम्म वृद्धि गरेको छ ।
नेपाली बजारमा सबैभन्दा लोकप्रिय रहेको एक्सपल्स २०० को १ हजार ५ सय र स्प्लेन्डर प्लसको १ हजार रुपैयाँले बढेको छ । एक्सपल्सको नयाँ मूल्य ४ लाख ३ हजार ५ सय र स्प्लेन्डरको १ लाख ९० हजार रुपैयाँ भएको छ ।
यामाहा नेपालको सबैभन्दा लोकप्रिय र भरपर्दो मोटरसाइकल ब्रान्ड मानिन्छ । यामाहाले अंग्रेजी नयाँ वर्ष २०२२ का लागि नयाँ मूल्य सार्वजनिक गरेको छ ।
नयाँ मूल्य अनुसार नेपाली बजारमा यामाहाका बाइकहरु न्युनतम २ लाख २४ हजार ९ सय रुपैयाँदेखि ३९ लाख ९९ हजार रुपैयाँसम्म तोकिएको छ ।
नयाँ मूल्य अनुसार यामाहा सलुटो बाइकलाई २ लाख २४ हजार ९ सय रुपैयाँ निर्धारण भएको छ । यो नै यामाहाको सबैभन्दा कम मूल्यमा पाइने बाइक हो ।
यस्तै, यामाहा एसजेड–आरआरको २ लाख ५९ हाजर ९ सय रुपैयाँ, एफजेडएस भीट२ २ लाख ९९ हजार, एफजेडएस भी२ ३ लाख २६ हजार ९ सय रुपैयाँ पर्दछ ।
होन्डाले जारी गरेको नयाँ मूल्य सूची अनुसार विभिन्न चार मोडेलका बाइकहरुको मूल्य वृद्धि गरेको छ ।
होन्डाले साइन, युनिकर्न, एक्स–ब्लेड र सीबी हर्नेटको मूल्यमा वृद्धि गरेको हो । यी बाहेका अन्य मोटरसाइकहरुको मूल्य भने यथावत छ ।
सबैभन्दा बढी वृद्धि होन्डा एक्स–ब्लेड रहेको छ । जसको मूल्य ३ लाख ३० हजार ९ सय रुपैयाँ पुगेको छ । २०२२ मा होन्डा एक्स–ब्लेडको मूल्य ६ हजार रुपैयाँले वृद्धि भएको हो ।
यस्तै, साइनका सबै भेरिएन्ट र सीबी युनिकर्न १५० तथा सीबी हर्नेटमा ५ हजार रुपैयाँको दरले मूल्य वृद्धि गरिएको छ ।
वि.सं.२०७८ पुस २८ बुधवार १७:४८ मा प्रकाशित
News Views: 395
अघिल्लाे डढेलोमा परी ज्यान गुमाएका वृद्धाको परिवारलाई एक लाख सहयोग
पछिल्लाे श्रीमती मारेको अभियोग लागेका व्यक्ति सात वर्षपछि पक्राउ
नबिल बैंक सञ्चालक समितिका अध्यक्ष पौडेलले लिए सपथ ग्रहण
वि.सं.२०७८ माघ ६ बिहीवार १२:००
काठमाडौँ । नबिल बैंकको संचालक समितिको अध्यक्षमा पुनः चयन भएका...
फेरि बढ्यो पेट्रोलियम पद्धार्थको मूल्य, प्रतिलिटर कति पुग्यो ?
वि.सं.२०७८ माघ ५ बुधवार २१:३६
काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पद्धार्थको मूलय बढाएको छ...
यस्तो छ ग्लोबल आईएमई बैंकले निकालेको अत्यन्त जरुरी सूचना !
वि.सं.२०७८ माघ ५ बुधवार १८:११
काठमाडौं । ग्लोबल आईएमई बैंकले आन्तिरिक सजावट (निर्माण) का कार्यका...
रा.वा. बैंकको ५७ औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा रक्तदान कार्यक्रम सम्पन्न
वि.सं.२०७८ माघ ५ बुधवार १७:२९
काठमाडौँ । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडको ५७ औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा...
घटेको बजारमा बुद्धभुमि र सामालिङ्ग पावरको सेयर मूल्यमा उछाल
वि.सं.२०७८ माघ ५ बुधवार १६:५७
काठमाडौँ । आज सेयर बजारमा गिरावट आएको छ । बजार...
अनलाइन बैंकिङ्ग प्रयोगकर्ता पौने २ करोड, वाणिज्य बैंक मात्रै साढे १ करोडको पहुँचमा
वि.सं.२०७८ माघ ५ बुधवार १६:१०
काठमाडौँ । नेपालमा चालु आर्थिक वर्षको मंसिरसम्म आइपुग्दा अनलाईन बैंकिङ्ग...